လူးဝစ် Martinez | | ယဉျကြေးမှု, ယေဘုယျ, italia
သင်အီတလီသို့သင်၏ခရီးစဉ်စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင် သင်တိုင်းပြည်အတွင်းသင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်မြို့များအားလုံး, ရောမဖြစ်ကောင်းသင်၏လမ်းကြောင်းအပေါ်မဖြစ်မနေရပ်တန့်သည် ရောမသို့မသွားမီသင်ကြည့်လိုသောရုပ်ရှင်ကိုသင်ရှာဖွေလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အား ဦး စွာထောက်ပြသင့်သည်မှာ၎င်းသည်ဖြစ်သည် ထာဝရစီးတီး ရုပ်ရှင်ရုံ၏ကမ္ဘာကြီးထဲမှာကြီးမားတဲ့ပါဝင်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ဒီတိပ်ခွေတွေမှာတော့ဒီဇစ်မြစ်ကိုရောလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံပါပါ။
အရင်နှင့်စပ်လျဉ်း။ ဂန္ထဝင်ရောမအားပြန်လည်ဖန်တီးသည့်ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားတစ်ခုပင်ရှိသည်။ အဆိုပါ peplum။ နှင့်အညီ, ဒုတိယကနေသကဲ့သို့ အီတလီ neorealism ၏စက်မှုလုပ်ငန်းရန် ဟောလိဝုဒ် ၏မြို့တော်ရွေးကောက်တော်မူပြီ italia မိမိအရုပ်ရှင်အများအပြားများအတွက် setting ကိုအဖြစ်။ ရော၊ ရောမကိုမသွားခင်မှာကြည့်ရမယ့်ရုပ်ရှင်တချို့ကိုမင်းတို့ထပ်ပြီးထပ်မပြောတော့ဘူး။
1 ရောမသို့မသွားမီကြည့်ရှုမည့်ရုပ်ရှင်များ - လူများစုမှယနေ့ရုပ်ရှင်ရုံအထိဖြစ်သည်
1.1 Ben Ben
1.3 La dolce vita သည်ရောမသို့မသွားမီရုပ်ရှင်များတွင်ပါဝင်မည့်နောက်ထပ်ဂန္ထဝင်ဖြစ်သည်
1.5 'ရောမမြို့၊ ပွင့်လင်းမြို့'
1.9 'Accatone', ဆင်ခြေဖုံးပုံတူ
ရောမသို့မသွားမီကြည့်ရှုမည့်ရုပ်ရှင်များ - လူများစုမှယနေ့ရုပ်ရှင်ရုံအထိဖြစ်သည်
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲရောမမြို့မသွားမီသင်မြင်ရမယ့်ရုပ်ရှင်တွေကမြို့တော်ကိုအဆင်သင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်။ သို့သော်ထို့အပြင်များစွာသောသူတို့ကလုပ်ပါ နောက်ထပ်ဇာတ်ကောင် ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ဘဝကိုတောင်အဆုံးအဖြတ်ပေးတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်တချို့ကိုသွားကြည့်မယ်
ကျနော်တို့ peplum ၏ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားအကြောင်းပြောနေတာခဲ့လျှင်, ဒီဟောလိဝုဒ် blockbuster ၎င်း၏အကောင်းဆုံးနမူနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကစီစဥ်ညွှန်ကြားသည် ဝီလျံ wyler နှင့်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည် ချာလ်တန် Heston, စတီဖင် boyd, ဂျက်ဟော့ကင်း y Haya Harareet, ကအမည်မသိဝတ္ထုအပေါ်အခြေခံသည် Lewis က Wallace.
ဤရုပ်ရှင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်၏ ၃၀၊ ယုဒပြည်မှစတင်သည်။ မင်းမျိုးအနွယ်ဝင် Judá Ben-Hur သူသည်ရောမအားဆန့်ကျင်မှုဖြင့်မတရားသဖြင့်စွပ်စွဲခံရပြီးလှေများဖြင့်ထောင်ချခြင်းခံရသည်။ ယေရှုခရစ်နှင့်တွေ့ဆုံပြီးများစွာသောအမြင်များကိုဖြတ်ကျော်ပြီးနောက်ဇာတ်ကောင်များသည်ရောမသို့ရောက်ရှိလာပြီးသူဌေးတစ် ဦး အဖြစ်အသွင်ပြောင်းကာပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ဘက်များဖြစ်သည်။ သို့သော်သူ၌တစ်ခုတည်းသောရည်မှန်းချက်ရှိသည် - မိခင်နှင့်အစ်မကိုထောင်ချခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည့်သူ၏မိတ်ဆွေဟောင်း Mesala ကိုလက်စားချေရန်ဖြစ်သည်။
'Ben-Hur' တွင်ဘတ်ဂျက်ဒေါ်လာ (၁၅) သန်းမျှရှိပြီး၊ ထိုအချိန်အထိရုပ်ရှင်အတွက်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ရာပေါင်းများစွာသောရုပ်ထုများနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုပြသထားသည့်အလုပ်သမားပေါင်းနှစ်ရာကျော်သည်၎င်း၏အလှဆင်ပစ္စည်းများကိုဆောက်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုနည်းတူစွာ ၀ တ်စုံများကိုဖန်တီးရန်ချုပ်ထားသောရာပေါင်းတစ်ရာတို့ကတာ ၀ န်ယူခဲ့သည်။ Y ရထားပြိုင်ပွဲမြင်ကွင်း ၎င်းသည်ရုပ်ရှင်ရုံသမိုင်းတွင်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သည်။
ဒီရုပ်ရှင်ကိုနယူးယောက်မှာ ၁၉၅၉၊ နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်မှာဖွင့်ခဲ့ပြီး 'Gone with the Wind' ပြီးနောက်ဒုတိယမြောက်အမြင့်ဆုံးဝင်ငွေအများဆုံးရုပ်ရှင်ဖြစ်လာသည်။ ကြောင်းမလုံလောကျလျှင်အဖြစ်သူရရှိခဲ့သည် တကျိပ်တပါးအော်စကာအကောင်းဆုံးရုပ်ပုံ၊ အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာနှင့်အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ဆုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်ရုပ်ရှင်ရုံ၏သမိုင်းတွင်အကောင်းဆုံးသောရုပ်ရှင်ကားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Plaza de España, 'ရောမအားလပ်ရက်' ၏အကျော်ကြားဆုံးမြင်ကွင်းများတစ်ခုရိုက်ကူးခဲ့သည်
ဒါရိုက်တာနောက်ရုပ်ရှင် ဝီလျံ wylerအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူပေမယ့်လည်းရောမမြို့သို့မသွားမီကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည်အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည် ခြေ Hepburn y ဂရက်ဂိုရီ။ ပထမတစ်ခုဖြစ်သည် အန္နမင်းသမီးတစ်ပါးသည်သူမ၏အသိုင်းအ ၀ ိုင်းမှထွက်ပြေးပြီးနောက်ရောမမြို့သားများကဲ့သို့မြို့တော်တွင်တစ်နေ့နှင့်တစ်ညနေခဲ့ရသည်။
၎င်းသည်အီတလီမြို့တော်ကိုယ်တိုင်နှင့်အလွန်နီးကပ်သောကျော်ကြားသောCinecittáစတူဒီယိုများတွင်ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ အကယ်ဒမီဆု ၇ ခုအတွက်ဆန်ခါတင်စာရင်း ၀ င်ခဲ့ပြီးသူမမမေ့နိုင်သော Audrey အတွက်အကောင်းဆုံးမင်းသမီးဆု ၃ ဆုရရှိခဲ့သည် ထိုနည်းတူစွာပင်လှေကားထစ်နှစ်ခုလုံးကိုဇတ်လိုက်များနှင့်တူသောမြင်ကွင်းများ စပိန်ရင်ပြင် သို့မဟုတ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ခရီးစဉ်၏နှစ်စဉ်ရုပ်ရှင်ရုံ၌ဆင်းသွားကြပြီ။
La dolce vita သည်ရောမသို့မသွားမီရုပ်ရှင်များတွင်ပါဝင်မည့်နောက်ထပ်ဂန္ထဝင်ဖြစ်သည်
La dolce vita မှအကျော်ကြားဆုံးမြင်ကွင်း
ကရေးသားနှင့်ညွှန်ကြားခဲ့သည် Federico Fellini ၁၉၆၀ တွင်ရုပ်ရှင်သမိုင်းတွင်ပါဝင်သောဂန္ထဝင်တစ် ဦး အဖြစ်တညီတညွတ်တည်းချီးကျူးခဲ့သည်။ ၎င်းနှစ်တွင်ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်၌ပြသခဲ့သည် ရွှေစွန်ပလွံပင်အော်စကာဆုကိုအကောင်းဆုံးဝတ်စုံဒီဇိုင်းဖြင့်သာရရှိခဲ့ချိန် မှစ၍ သူသည်အော်စကာဆုအတွက်ကံမကောင်းဖြစ်ခဲ့ရသည်။
၎င်း၏ဇတ်ကောင်များဖြစ်ကြသည် Marcelo mastroianni, Anita ekberg y Anouk Aimée ထိုကြံစည်မှုသည်ရောမမြို့တော်နှင့်၎င်း၏ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ဆက်စပ်နေသည့်လွတ်လပ်သောပုံပြင်များကိုဖော်ပြသည်။ ဤကိစ္စတွင်လည်းသင်မမေ့နိုင်သောမြင်ကွင်းကိုအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည် Trevi စမ်းရေတွင်း.
Nanni Moretti၊ 'ချစ်ခင်ရပါသောသတင်းစာ' ၏ဒါရိုက်တာ
ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိရုပ်ရှင်၊ ဒါရိုက်တာနှင့်ဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်။ Nani moretti, ထာဝရစီးတီး၌သူ၏အတွေ့အကြုံများကိုပြောပြသည်။ ၎င်းတွင်သီးခြားဖြစ်စဉ် (၃) ခုပါဝင်ပြီး၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နှင့်ဟာသကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးနောက်နှစ်တွင်၎င်းကိုရရှိခဲ့သည် ရွှေစွန်ပလွံပင် ကိန်းမှာသာမကအကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုအတွက်လည်းပါပါတယ်။
လူသိများသောဇာတ်ကောင်များသည် Vespa ၏နောက်ကျောရှိမြို့ကိုဖြတ်သန်းသွားသောမြင်ကွင်းများဖြစ်သည်။ Flaminio တံတား o Garbatella။ အကယ်၍ သင်သည်ရောမမြို့၏လူသိနည်းဆုံးနှင့်အလယ်ပိုင်းဒေသများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုရယူလိုလျှင်ဤရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရှုရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးပါသည်။
အများကြီးလျော့နည်းကြင်နာသေံ၏ဤရုပ်ရှင်ရှိပါတယ် ရောဘတ် Rosellini ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင်ပြသခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းတွင်နာဇီများဆန့်ကျင်ရေးနှင့်ဆက်စပ်သောဇာတ်ကောင်အမြောက်အများကိုဖော်ပြထားသည်။
သို့သော်အဓိကဇာတ်ကောင်များထဲမှတစ်ခုမှာယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်သည် ဖခင် Pietroသူသည်ဂျာမန်များကသေနတ်ဖြင့်ပစ်သတ်ခံရပြီးမှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် Luigi morosiniခုခံတွန်းလှန်မှုကိုကူညီခဲ့သူဖြစ်ပြီးနှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်းနှင့်သတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
အလားတူပင်၏အခန်းကဏ္.ကို နာနတ်သီး, ကစားအမျိုးသမီးတစ် ဦး Ana Magnani။ ဒါ့အပြင် Aldo Fabrizi, Marcello Pagliero, Nando Bruno, Harry Feist နဲ့ Giovanna Galletti တို့လည်းပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ၎င်းသည်အလွန်ခက်ခဲသောတိပ်ခွေဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်ဆင်ဆာလုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပြissuesနာများရှိနေသည်။ ပြန်၌၎င်းရရှိခဲ့သည် ရွှေစွန်ပလွံပင် ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ။
Marcelo Mastroianni ဆိုဖီယာလော်ရန်နှင့် 'အထူးနေ့တစ်' ၏ကြယ်ပွင့်
Marcello mastroianni y Sophia Loren သူတို့ဟာရုပ်ရှင်တော်တော်များများမှာအတူတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပေမယ့်ဒါဟာအကောင်းဆုံးတစ်ခုပါ။ ၎င်းကိုဖက်ဆစ်ဝါဒအရှိန်အဟုန်ဖြင့် ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်များတွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးထိုအချိန်ကအီတလီလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အရေးပါသောပုံတူဖြစ်သည်။
Mastroianni သည်လိင်တူချစ်သူဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပစ်ခတ်သောရေဒီယိုအိမ်ရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီး Loren သည်အစိုးရအရာရှိတစ် ဦး နှင့်လက်ထပ်ထားသည့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုဖွင့်သည်။ ၁၉၃၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၆ ရက်နေ့တွင်ဟစ်တလာအားဂုဏ်ပြုသောချီတက်ပွဲသို့သူတို့မတက်ရောက်ခဲ့ကြသောကြောင့်သူတို့နှစ် ဦး သည်မတော်တဆတိုက်မိသည့်အခါသူတို့နှစ် ဦး ကြားဆက်ဆံရေးကိုစတင်ခဲ့သည်။
ရုပ်ရှင်၏ဒါရိုက်တာဖြစ်ခဲ့သည် Ettore scolaသူလည်းဇာတ်ညွှန်းအပေါ်ပူးပေါင်းသူ။ သူသည်သိလိုစိတ်ပြင်းပြသည့်အနေဖြင့်သူသည်ရုပ်ရှင်၌အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည် Alessandra mussoliniဖက်ဆစ်အာဏာရှင်၏မြေး။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆုချီးမြှင့်ခံရခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အော်စကာဆုနှစ်ဆုရရှိခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နှင့်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံခြားဘာသာစကားရုပ်ရှင်ကားဖြစ်သည်။
ရောဘတ်ဘင်နင်နီသည် 'A Roma con amor' ၏ဇတ်ကောင်များထဲမှတစ်ခု
ပိုမိုမကြာသေးမီကရိုက်ကူးထားသောဤရုပ်ရှင်သည် ဒါရိုက်တာ Woody Allen၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းသည်ထာဝရစီးတီးတည်ရှိရာနေရာဖြစ်သည်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနှင့်ကျော်ကြားမှုဆိုင်ရာအဓိကအကြောင်းအရာများအပေါ်အဓိကထားသောဇာတ်လမ်းလေးခုကိုပြောပြသည့်အချစ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ အဓိကဇာတ်ကောင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော Jerry အမည်ရှိဂီတထုတ်လုပ်သူကို Allen ကိုယ်တိုင်ကတီးခတ်သည်။
အခြားသူများကတော့ဂျက်, ကစားတဲ့ဗိသုကာကျောင်းသားဖြစ်ကြသည် Jesse eisenberg; လီယိုပိုဒိုသည်အမည်မသိသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးရုတ်တရက်မီဒီယာအာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်လာသည် Roberto Benigni, နှင့်အန်တိုနီယို, သူကစားတစ် ဦး အခန်းကဏ္။ Alessandro tiberi။ သူတို့နှင့်အတူ Penelope Cruz၊ Fabio Armilato၊ Antonio Albanese နှင့် Ornella Muti တို့ပါရှိသည်။
Toni Servillo, 'The great beauty' ၏ကြယ်ပွင့်
ယခင်ရုပ်ရှင်ကားကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည့်ခေတ်သစ်နှင့်ရိုက်ကူးထားသောဒီရုပ်ရှင်သည် Paolo Sorrentinoသူလည်းအတူ script ကိုရေးသားခဲ့သည် Umberto Contarello။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အမူအကျင့်တစ်ခုပါရှိသည်။
ferragosto ကစိတ်ပျက်အားငယ်နေသောစာနယ်ဇင်းသမားနှင့်စာရေးဆရာအားဖြင့်ရောမမြို့တွင်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည် Jep Gambardella ၎င်းသည်မြင့်မားသောလူမှုရေးနယ်ပယ်များ၏ကိုယ်စားပြုဇာတ်ကောင်အမျိုးမျိုးနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ရဲဘော်ရဲဘက်များ၊ နိုင်ငံရေးသမားများ၊ အဖြူရောင်ကော်လာရာဇ ၀ တ်သားများ၊ သရုပ်ဆောင်များနှင့်အခြားလူပုဂ္ဂိုလ်များသည်ခမ်းနားထည်ဝါစွာနန်းတော်များနှင့်သာယာလှပသောအိမ်များတွင်ပြုလုပ်သောဤကြံစည်မှုကိုပြုလုပ်ကြသည်။
ရုပ်ရှင်ကြယ် Toni Servillo, Carlo Verdone ပါ, Sabrina ferilli, Galatea ranzi y Carlo Buccirossoသည်အခြားစကားပြန်များအကြား။ 2013 ခုနှစ်တွင်သူမချီးမြှင့်ခဲ့သည် ရွှေစွန်ပလွံပင် နှင့်အတူမကြာမီပြီးနောက်, ကိန်းနှင့် အော်စကာ အကောင်းဆုံးနိုင်ငံခြားဘာသာစကားရုပ်ရှင်သည်။ သို့သော်အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပြီးသော La dolce vita အစီအစဉ်၏နောက်ဆုံးအခြေအနေဖြစ်သည်။
Pier Paolo Pasolini, Accatone ဒါရိုက်တာ
ရောမသို့မသွားမီကြည့်ရှုရန်ဤရုပ်ရှင်ကားစာရင်းတွင်ဒါရိုက်တာတစ် ဦး ပျောက်ဆုံးမည်မဟုတ်ချေ Pier paolo pasoliniထာဝရစီးတီး၏အနှစ်သာရကိုမည်သို့သိမ်းဆည်းရမည်ကိုအကောင်းဆုံးသိသောပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သူသည်သူ၏ထူးခြားသောရှုထောင့်မှကြည့်ရှုစစ်ဆေးခံခဲ့ရသည်မှာမှန်ကန်သည်။
တိပ်ခွေတွေအများကြီးကိုမင်းတို့ပြောပြနိုင်ပေမဲ့၊ ဒီဟာကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ရောမရဲ့ပုံတူဖြစ်လို့ပဲ။ Accatone သည်သူ၏ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်များမှအခိုးအငွေ့ဖြစ်ပြီးသူ၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကဲ့သို့ငတ်မွတ်ခြင်းကိုမရပ်တန့်စေပါ။ အလုပ်မလုပ်မီမည်သည့်အရာကိုမဆိုလုပ်နိုင်။ သူသည်အမျိုးသမီးများအားခေါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်ရန်နှင့်ဆက်ပြောသည်။
ထိုဇာတ်ကွက်မှသင်မြင်နိုင်သည်မှာ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ် ၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကရောမလောက၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောပုံတူဖြစ်သည်။ ကနေသောက်ပါ အီတလီ neorealism နှင့်အားဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသည် Franco Citti, Silvana Corsini, Franca Pasut y Paola Guidi သည်အခြားစကားပြန်များအကြား။ သိချင်စိတ်တစ်ခုအနေဖြင့်၊ Bernardo Bertolucci သူသည်ရုပ်ရှင်၌လက်ထောက်ဒါရိုက်တာအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ ရောမသို့မသွားမီကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင်။ ၎င်းတို့သည်ထာဝရစီးတီးကိုစင်မြင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်နောက်ဇာတ်ကောင်တစ် ဦး အနေဖြင့်ကိုယ်စားပြုသူများအားလုံး၏ကိုယ်စားပြုအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ငါတို့ကဲ့သို့အခြားသူများကိုဖော်ပြနိုင်ဘူး 'ကောင်းကင်တမန်များနှင့်နတ်ဆိုးများ'ဂရက်ဂိုရီဝိုင်ဒန်၊ 'Cabiria ၏ညများ'Federico Fellini က, 'လှပတဲ့'Luchino Visconti သို့မဟုတ် 'ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆုတောင်းပါ'ရိုင်ယန်မာဖီသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ယေဘုယျ » ရောမသို့မသွားမီကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင် ၉ ခု